Umgaqo-nkqubo wabucala | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » umthetho wabucala
Ukusasazwa kweBeat - Umgaqo-nkqubo wabucala
Imfihlo yakho ibalulekile kuthi, ke ngoko siqulunqe umgaqo-nkqubo wabucala oqulathe ulwazi olubalulekileyo olufana nokuba singoobani, njani kwaye kutheni siqokelela ulwazi lwakho, kunye nendlela esiyisebenzisa kwaye silugcina ngayo olu lwazi, kubandakanya ngokunxulumene nokufikelela kwakho. kunye nokusetyenziswa kwewebhusayithi yethu kunye nokusetyenziswa (iiapps). Siyakucela ukuba uyifunde ngocoselelo njengoko iqulethe ulwazi olubalulekileyo kwaye icacisa ukuba unganxibelelana njani nathi ukuba unemibuzo. Kwakhona nceda uqaphele ukuba ngokusebenzisa iinkonzo zethu, sicinga ukuba uyavuya xa siqhubekeka iinkcukacha zakho njengoko kuchaziwe kulo Mgaqo-nkqubo Wabucala.
Ukusabalalisa Beat kuyinto yedijithali yemithombo yedijithali eyenzelwe ukubonelela nge-teknoloji-kunye nolwazi kwiinkcukacha zokusasazwa, umfanekiso weshukumiso kunye nomshishini wokupasa. Sifumane kwi4028 NE 6th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33334. Inombolo yethu yoqhagamshelwano yi-954-233-1978. Ukufikelela kwi-platform yethu kufumaneka ngqo kwiwebhusayithi yethu www.broadcastbeat.com. Ukusasazwa uBet uzibophezele ekukhuseleni ubumfihlo kunye neenkcukacha zalabo abalandela umxholo wethu.
IiNkcukacha zakho zobuqu
Siyabulela ngokulandela iindaba kunye nolwazi esibonelela ngalo kumzi mveliso wethu kwaye siqwalasele idatha yakho ethe-ethe. Injongo yethu kukuqinisekisa ukuba usasazo lwethu lukhuselekile kwaye nemfihlo yakho iyagcinwa. Ukongeza, xa ukhangela kwiphepha lethu lewebhu, silandelela oko ngeenjongo zohlalutyo ezinje ngokuvavanya izinto ezintsha, ezisebenziseka lula kunye nezihloko onomdla kuzo. Siza kugcina naluphi na ulwazi olufaka ngokuzithandela; umzekelo, ii-imeyile zonxibelelwano, iingcebiso zenkqubo, imibuzo emalunga neenkqubo kwimiboniso yezoshishino, izicelo zodliwanondlebe, amaphepha amhlophe, ii-webinars kunye nokhuphiswano.
Ukukhuselwa kweeNkcukacha zakho
Isaziso sethu sobumfihlo sichaza ukuba yeyiphi idatha ye-personal (PD) kunye nedatha engeyiyo (NPD) esinokuqokelela kuwe, indlela esiyiqokelela ngayo, indlela esiyikhusela ngayo, indlela ongayifumana ngayo kwaye uyitshintshe. Isaziso sethu sobumfihlo sichaza amalungelo athile omthetho onayo malunga neenkcukacha zakho.
Xa usebenzisa i-website yethu kunye neenkqubo zokusebenza, kwaye uthumela ulwazi lomntu siqu, unokufumana amalungelo athile phantsi koMgaqo-jikelele woKhuselo loLwazi (GDPR) kunye neminye imithetho. Ngokuxhomekeke kwisiseko somthetho sokucwangcisa idatha yakho, unokufumana unamalungelo okanye alandelayo alandelayo:
Ilungelo lokwaziswa-Unelungelo lokwaziswa malunga nedatha yobuqu esiyiqokelelayo kuwe, kunye nendlela esiyenza ngayo.
Ilungelo lokufikelela- Unelungelo lokufumana isiqinisekiso sokuba idatha yakho yobuqu iyacutshungulwa kwaye unakho ukufikelela kwidatha yakho.
Ilungelo lokulungiswa kwakhona - Unelungelo lokuba idatha yakho yobuqu ilungiswe ukuba ayichanekanga okanye ayiphelelanga.
Ilungelo lokususa (ilungelo lokulityalwa) -Unelungelo lokucela ukususwa okanye ukucinywa kwedatha yakho yobuqu ukuba akukho sizathu sinyanzelisayo sokuba siqhubeke siyicubungula.
Ilungelo lokuthintela ukuqhubekeka-Unelungelo 'lokuthintela' okanye ukuthintela ukwenziwa kweedatha zakho. Xa idatha yakho yobuqu ithintelwe, sivunyelwe ukugcina idatha yakho, kodwa hayi ukuyiqhuba ngakumbi.
Ilungelo lokuphatheka kwedatha - Unelungelo lokucela kwaye ufumane idatha yakho eyimfihlo oyinike yona kwaye uyisebenzise ngeenjongo zakho. Siza kunika idatha yakho kuwe kwiintsuku ze-30 zesicelo sakho. Ukuze ucele idatha yakho, nceda uqhagamshelane nathi ngokusebenzisa ulwazi oluphezulu kwesaziso sabucala.
Ilungelo lokuchasa - Unelungelo lokusichasa siqhubekeka idatha yakho yobuqu ngezi zizathu zilandelayo: Ukulungiswa bekusekwe kwiminqweno esemthethweni okanye ukwenziwa komsebenzi kuluntu / ekusebenziseni igunya elisemthethweni (kubandakanya ukuprofeta); Ukuthengisa ngokuthe ngqo (kubandakanya iprofayili); kunye nokuqhubekeka kweenjongo zophando lwenzululwazi / lwembali kunye neenkcukacha-manani. Amalungelo ngokunxulumene nokwenza izigqibo ngokuzenzekelayo.
Ukwenza izigqibo ezizenzekelayo kunye nokwenza iprofayili-Uya kuba nelungelo lokungaxhomekeki kwisigqibo esisekwe kulungiso oluzenzekelayo, kubandakanya ukuprofeta, okuvelisa iziphumo zomthetho ngokubhekisele kuwe okanye ngokukuchaphazela ngokufanayo.
Ukufaka isikhalazo kubasemagunyeni - Unelungelo lokufakela isikhalazo kubaphathi bamagosa ukuba ulwazi lwakho aluzange lulandelwe ngokuhambelana noMgaqo-jikelele woKhuselo loLwazi. Ukuba abaphathi bamagosa abajongayo bayakwazi ukulungisa isikhalazo sakho ngokufanelekileyo, unokuba nelungelo lokulungisa umgwebo. Ukufumana iinkcukacha ngamalungelo akho phantsi komthetho, tyelela www.privacyshield.gov/
Asiyi kunika idatha ekuthotyelweni komthetho ngaphandle komyalelo wenkundla. Ukuba oko kwenzeka, siya kuzama ukukwazisa ngesicelo ngaphandle kokuba sithintelwe ngokomthetho ukwenza njalo.
Xa usebenzisa i-Broadcast Beat sinokusebenzisa "ii-cookies", "ii-beacons zewebhu", kunye nezixhobo ezifanayo ukulandelela imisebenzi yakho. Ezi ngcezu ezincinci zolwazi zigcinwe kwi-hard drive yakho, kungekhona kwiwebhsayithi ye-Broadcast Beat.
Sisebenzisa ikuki ukukunceda uhambe kwiWebhusayithi ye-Broadcast Beat ngokulula, kwaye ukhumbule ulwazi malunga neseshoni yakho yangoku. Asisebenzisi obu buchwephesha ukukuhlola okanye kungenjalo singene kubumfihlo bakho. Unokukhubaza ii-cookies kunye neetekhnoloji zokulandela umkhangeli ngewebhu yokukhangela.
Ukhuseleko kunye nokugcinwa
Iwebhusayithi ye-Broadcast Beat inamanyathelo okhuseleko akumgangatho okhuselekileyo ukukhusela ilahleko, ukusetyenziswa gwenxa, kunye notshintsho lolwazi oluphantsi kolawulo lwethu. Ngelixa kungekho nto ithi "kukhuseleko olugqibeleleyo" kwi-Intanethi, siya kuthatha onke amanyathelo afanelekileyo ukuqinisekisa ukhuseleko lweenkcukacha zakho.
Yonke idatha ibhalwe ngekhowudi SSL / TLS xa usasazwa phakathi kwamaseva ethu kunye nesiphequluli sakho. Idatha yethu yedatha ayibhaliweyo (kuba kufuneka ifikelele ngokukhawuleza), kodwa siya kwixesha elide ukukhusela idatha yakho ngokuphumla.
Asiyi kuthengisa okanye sabelane ngalolu datha kunye nawaphi na amaqela angaphandle.
Siyaqhubeka nokukhusela, esilungiselelwe ukubuyisela inkqubo yentlekele, kwiintsuku ze-30. Iingcebiso ezicatshulwayo zihlanjululwa kumjikelezo wemihla ye-30. Xa iifayili zifundwa kwaye zingasindiswa, zihlanjululwa ngokuzenzekelayo kwi-30-cycle cycle.
Iinguqu kunye nemibuzo
Izilungiso kule nkcazo ziya kuthunyelwa kule URL kwaye ziya kusebenza xa zithunyelwe. Ukusetyenziswa kwakho okuqhubekayo kwesi siza emva kokuthunyelwa kweyiphi na isilungiso, ukuguqulwa, okanye utshintsho kuya kubakho ukwamukelwa kwakho kwesilungiso. Siza kukuxelela malunga neenguqu ezibalulekileyo ngokuthumela i-imeyile umnini-akhawunti okanye ngokubeka isaziso esibalulekileyo kwisayithi lethu. Ukuba unemibuzo malunga nale nkcazo yobumfihlo okanye ukusebenzisana kwakho noThuthulo lweBroadcast, ungaqhagamshelana nathi [imeyile ikhuselwe].